Iwayini elisuka kwikherrant ekhaya. Izindlela zokupheka ezinhle kakhulu zewayini elibomvu nelingu-black currant ngaphandle kwemvubelo
Indlu yasekhaya Ukupheka Okunye Ukupheka kwezingqikithi ebusika Amakhodi kusukela ku-currant ebusika
Iwayini elizenzelayo kusuka ku-currant ngaphandle kwemvubelo yindlela elula yokupheka. Ukupheka kwewayini elibomvu nelomnyama i-currant ekhaya
Ama-winemakers emhlabeni jikelele njengama-currants abomvu nabomnyama okungahloniphi ekukhuleni, isivuno esikhulu, ukunambitheka okumangalisayo nephunga elimnandi, ukuvutshelwa okuhle kakhulu nokukhiqizwa okukhulu komkhiqizo ophelile. Kuwanele kuphela i-kilogram yamajikijolo avuthiwe ukuze uthole ama-2.5 amalitha esiphuzo elimnandi. Ngisho iwayini elilula elivela kwi-currant lihlale ligcwele, licebile futhi linamakha. Ukuyipheka ekhaya kuyinjabulo, futhi ukuphuza kwenkampani enhle kujabulisa ukubonisana okulula kanye ne-gourmet yeqiniso. Kulesi sihloko sikunikeza ezimbalwa zokupheka ezihlwabusayo nezilula zewayini elenziwe nge-currant, elilungiselelwe ngaphandle kwemvubelo.
Iwayini elimnandi kusuka ku-currants ekhaya: iresiphi ngaphandle kwemvubelo
Izinzuzo zewayini le-currant zingatshelwa ukuthi azimele. Ukwakhiwa kwamakhemikhali ecebile necebile ukuqinisekiswa okuqondile kwalokhu. Womabili ama-currants abomvu namnyama agcwele amavithamini amaqembu ahlukene, ama-acids ewusizo, ama-microelements abalulekile emzimbeni. Phuza, ulungiselelwe ekuvuneni okuvuthiwe, uqinisa isimiso sezinzwa kanye nezindonga zemithambo yegazi, ukwandisa igciwane lesandulela ngculazi, uthuthukise umzimba. Lungisa iwayini elimnandi kwi-currant ngokusho kweresiphi yethu ngaphandle kwemvubelo ngesithombe futhi uzibonele izakhiwo zayo ezimangalisayo.
Izithako ezibalulekile zewayini lewayini ngaphandle kwemvubelo
amanzi ahlungiwe - izingxenye ezintathu
ushukela - ingxenye engu-1
currants ezivuthiwe - izingxenye ezimbili
Imfundo yesinyathelo-nge-step iresiphi yewayini le-currant ekhaya
Zonke izitshalo ze-currant ezivuthiwe ziyadluliselwa ngendlela yokuthi akukho amajikijolo asele aphelele. Ukuwasha kanye nokumisa amajikijolo akumele kwenziwe.
E-gruel egcotshwe engeza ingxenye yesithathu yamanzi. Ngakho amajikijolo ayoqala ngokushesha ijusi futhi anikeze yonke into ewusizo nephunga.
Esikhathini esilandelayo, uthele ushukela kanye nesamba esincane semifino emaspipini ukusheshisa ukuvutshelwa.
Hlanganisa ngokuphelele ubukhulu berry bese ususa isitsha ngewayini elizayo lekhaya endaweni epholile emnyama izinsuku ezingu-8. Ungakhohlwa ukuxuba kanye ngosuku ukuvimbela ukwakheka kwesikhunta esiyingozi.
Ngemuva kwesonto, cindezela u-pulp ngesandla noma nge-press, uyibeke esitsheni esisodwa. Hlanganisa i-substrate ye-liquid ngokusebenzisa i-colander.
Ijusi le-currant elihlungiwe lingene embizeni, faka i-septum. Esikhathini esinyanyisiwe, sithumela enye ingxenye yeshukela, ukuze ivuselele kabusha.
Ngaphezu kwalokho ungene emkhunjini nge-pulp, uthele amanzi amancane, ukuze uketshezi "ugeze" ketshezi. Faka kahle futhi ushiye futhi izinsuku ezingu-8, njengokungathi okokuqala.
Ngemva kwesonto noma amabili, yenza izenzo ezifanayo ngxube elivutshiwe njengokwesibili: cindezela ikhekhe, unciphise ijusi.
Phakathi naleso sikhathi, ebhange nge-batch yokuqala, kuhlanganiswa ukugcwala kwamathambo amathathu, lapho ungqimba ongaphansi ungaphansi kwe-blackcurrant jelly, isendlalelo esingaphakathi iwayini elingagcwalisiwe, ungqimba olungaphezulu luwubuciko obunembewu. Isendlalelo sokugcina kufanele sibanjwe nge-spoon ehlanzekile futhi icindezelwe ngangokunokwenzeka, ukuphonsa okushiya kudoti.
Amakhemikhali avela emaceleni okuqala nesesibili ahlanganiswe embizeni eyodwa, ashiye ezinye izinsuku ezingu-10-12 kuze kube khona ukugcwaliswa okufanayo kwezintathu.
Ngemuva kwesigamu nesigamu ukuya emavikini amabili, godu, susa i-foam ngembewu, ubeke iwayini elizayo, uphekwe ekhaya, bese ubeka ngaphansi kwesibindi izinsuku ezingu-15.
Hlunga (i-strains) i-currant iwayini ne-tube encane, ngaphandle kokuthinta ungqimba ongaphansi, okungenani kanye ngesonto. Thela umkhiqizo ohlanzekile kwisitsha esisha, bese ushiya okusele ku-canal endala.
Ukuhlungwa kwesiphuzo kuyinkimbinkimbi, isikhathi eside futhi kude nenqubo yesikhathi esisodwa. Kodwa umphumela wokugcina uzojabula ngokunambitheka okumnandi nephunga elimnandi lewayini elenziwe ekhaya elenziwe nge-currant.
I-redcurrant iwayini ekhaya - iresiphi yevidiyo
I-redcurrant iwayini ekhaya iyisisetshenziswa sabantu abavilapha bangempela. Ngokungafani nesiphuzo esibomvu "congenitor", lo akudingi ukubalwa okulinganiselwe kokulingana, noma izenzo ezithandekayo eziqondile. Kwanele ukuguqula amajikijolo avuthiwe ku-grinder yenyama nayo yonke amathambo-izimpande, uhlanganise izithako ezengeziwe futhi ufihle endaweni efanelekayo. Futhi-ke ungaqhubeka kube lula ukuba uvila kuze kufike iwayini le-currant ngokwalo ... Ukuze uthole iresiphi eningiliziwe nencazelo yobuchwepheshe, bona ividiyo:
Iwayini elimnandi elimnandi ekhaya - iresiphi elula
Kusukela ku-currant emnyama kungcono ukulungiselela amawayini e-liqueur ne-dessert. Banephunga elimnandi elimnandi nelinambitheka ejulile ehlukahlukene. Ithebula lewayini, i-berry iyindilinga kakhulu. Ngobuningi bezinhlobo ze-currant ekulungiseleleni iwayini elilula ekhaya, ngokuvamile kuvame ukusetshenziswa izinhlobo ezilandelayo: i-Centaur, i-Loshitskaya, i-Belarusian sweet, njll. Nakuba konke okuphuzwayo akusizi ngalutho futhi kuyinambitha.
Izithako ezibalulekile zekhasi elilula lewayini
i-currant - 10 kg
amanzi ahlungiwe - 15 l
ushukela omhlophe - 6 kg
Imfundo yesinyathelo-nge-isinyathelo iresiphi elula yewayini le-currant
Qaphela ngokucophelela amajikijolo angahlanjululwa, ususe zonke izithelo ezifakiwe noma eziluhlaza. Dlulisa i-currant yonke ngephini elichotshozayo noma elishayo.
Emanzini afudumele, qeda ingxenye yeshukela. Yengeza uketshezi kumasi berry, hlanganisa konke kahle. Beka isitsha endaweni efudumele izinsuku ezingu-4.
Ngokushesha nje lapho inqubo yokuvutshelwa iqala, gcoba uketshezi ube yiziqukathi ezihlukile bese ucindezela i-pulp. Engeza i-kilo-kilo yeshukela kuze kufike ijusi bese uyivala ngesinamanzi. Susa isitsha sokuqothula okuphelele kwezinye izinsuku ezingu-25 ekamelweni elinemodi ye-18C.
Njalo ngezinsuku ezingu-2-3, qapha i-asidi yesigodi. Lapho ama-bubbles eyeka ukuphuma nge-bolt, futhi i-wort ikhanya, inqubo yokuvuthwa ingabhekwa njengephelele.
Ngethubhu elincane, gcoba uketshezi ibe yikhethini ehlukile, ngaphandle kokuthatha isilwane kusuka phansi. Thumela isiphuzo izinyanga ezimbili emakhazeni ukuvuthwa. Phinda njalo ngezinsuku ezingu-15. Ekupheleni kwesikhathi, gcoba i-currant iwayini phezu kwamabhodlela okuglasi bese uwafakela ngezinyawo.
Iwayini elizenzelayo elivela kumnyama omnyama - iresiphi yevidiyo
E-winemaking yasekhaya noma yikuphi ukuvuna kuthola indawo yayo: ama-raspberries nama-cherry, ama-strawberries nama-strawberries, ama-plums kanye namakhabe. Ehlobo, iwayini lingenziwa ehlathini elimnandi noma amajikijolo ensimini. Ukuhlolwa kwewayini kwasebusika okuvela ezintweni eziluhlaza ezibandisiwe zamukelwa. Izinkinga azizesabi, ngoba ubuchwepheshe bokupheka abukhathanisi njengoba kubonakala ekuqaleni. Ukuze uthole iresiphi eningiliziwe yokwenza iwayini elenziwe ekhaya kusuka ku-black currant, bona ividiyo:
Iwayini elimnandi kusuka ku-currant - iresiphi elula ngaphandle kwemvubelo
Ngokuvamile, ama-currants amnyama adumeza amanye amawayini. Isibonelo, isiphuzo se-cherry ngeke sibe nephunga elimnandi ngenxa ye-bleachiness yamajikijolo ngokwawo. Kodwa ngale nhlanganisela ye-cherries kusukela ku-currant izonikeza umphumela omusha ngokuphelele ongajwayelekile. Kungakhathaliseki ukuthi kwakungakanani, ngaphezu kwanoma yini enye, iwayini elihlanzekile kusukela ku-currant ngaphandle kwemvubelo eyigugu. Awukwazi ukuqhathaniswa nanoma yini: ukunambitheka okumangalisayo kubonakala emanzini amaningi, futhi iphunga elimnandi lilotshiwe ehlobo elishisayo.
Izithako ezibalulekile zokupheka iwayini ekhaya ngaphandle kwemvubelo
black currant - 3 kg
amanzi okuphuza - 3 l
Imfundo yesinyathelo-by-step iresiphi yewayini lasekhaya kusuka ku-currant ngaphandle kwemvubelo
Amajikijolo angagqwaliwe, aphule kuze kufike ukwakhiwa kwe-gruel. Ukusuka kwamanzi noshukela ukupheka isiraphu, ukugcoba uphinde uthule i-currant mass.
Thelela iwayini emgodini weglasi bese uvumele ukuhambahamba ngesonto.
Ngemuva kokuphela kwenqubo yokuvutshelwa, thinta isiphuzo ngokusebenzisa ungqimba woboya bekotini, uthele phezu kwamabhodlela amancane futhi uvale ngokuqinile ngama-lids.
Gcina iwayini elincane kusuka ku-currant ngaphandle kwemvubelo endaweni epholile, ebumnyama.
Ukuphumelela ekusebenziseni imali ekhaya kuncike kakhulu ekufisweni nesifiso somnikazi. Futhi ngezinye izikhathi - ngekhwalithi lamajikijolo. Iwayini elenziwe ngamanzi elenziwe nge-currant elibomvu noma elimnyama ngaphandle kwemvubelo ngokuqinisekile liyoba okumnandi uma ulandela ngokuqinile iresiphi bese ulahla konke ukunganaki.
I-currant ebomvu ebusika: izindlela zokupheka ezingcono kakhulu zama-jams, ama-sauces, ama-jellies. Ukulungiselela ama-currants abomvu ebusika ku-multivark nasesitofu
I-currant yomnyama omnyama
IJam imizuzu emihlanu ngaphandle kwe-currant (emnyama nebomvu) - zokupheka ebusika, kuhlanganise. ku-multivark. Jelly imizuzu emihlanu ngaphandle kwe-currant ngokusebenzisa i-grinder yenyama
Isihloko sobusuku nalokho okuyikho
Ukungakhulelwe kanye nokuzivikela komzimba womuntu
Ziyini izimpawu zokunakwa kwamantombazane?
Indlela yokuhlobisa izihlalo zomshado - imibono yokuhlobisa imikhosi
I-Vertigo: ukusebenzisana okungalungile kokuhamba
Ukuphumelela kwesisindo sokudla kwesisindo kubantu abasha
Kuyini ukungezwani komzimba, ukubonakaliswa kwemizwelo
Indlela yokuwina indoda ayibonakali?
Zihlobo luni lwezipho amadoda afana nazo?
Uma umuntu esekhulile, kufanele asebenzise imali intombazane?
Silungisa ihansi ngekhanda. Amathiphu, amacebo kanye nezindlela zokupheka
Imfihlakalo kaDahlia: umugqa wezesekeli Miu Miu Dahlia